Emebere ngwa ngwa ahaziri iche ma megharia usoro nke agbaze maka ndị ahịa nwere nkọwa sitere na 400mm-1600mm. Enwere ike iji eriri mmepụta reciprocating ọ bụghị naanị maka imepụta akwa na-agbaze, kamakwa maka imepụta ihe na-agba mmiri mmiri na ihe nhicha ikuku. A na-ejikarị ihe ndị na-eme ka mmiri dị n'ime mmiri na-agwọ mmiri, ụlọ ọrụ mmanụ na ụlọ ọrụ kemịkalụ, nwere ụdị edo edo, izi ezi zuru oke, mmetụta doro anya, na mmetọ siri ike na-ejikwa ike na ogologo ọrụ. A na-ejikarị ihe ndị na - eme ikuku ikuku na - eme ka ikuku dị ọcha, gụnyere ma ọ bụghị naanị maka nsacha ikuku dị n'ime ụlọ, nhazi ikuku ikuku, wdg Ọ nwere uru nke arụmọrụ dị elu na ike uzuzu dị elu.
Igwe a nwere ike imebeghi ihe ndozi mmiri, kamakwa nke eji achoghi akwa. Site na ịgbanwe anya nke azụ na-aga, na-agbakwa ọsọ, ụzọ nrụpụta nwere ike ime ka ndị na-abụghị kpara wee toro karị. Mgbe ahụ, enwere ike iji akwa a mee akwa mmiri, iji mee ka olulu na ihe ndị ọzọ mee ka ndị mmadụ kpoo ọkụ.
N'ụzọ dị ịtụnanya, ụbọchị ndị na-adịbeghị anya, ndị injinia ụlọ ọrụ anyị na-eme atụmatụ ime ka mmiri na-anabata akwa akwa ụmụaka. Ha enwetela ọmarịcha ihe ịga nke ọma. Mmepụta nke emeputara n'usoro eji eweghachi mmiri nwere ike imbibi mmiri. Yabụ ọrụ nke usoro nrụpụta ọrụ anyị dị iche iche. N’ụbọchị ndị na-abịanụ, ụlọ ọrụ aka ụlọ ọrụ anyị ga-azụlitekwu ọrụ nke nrụpụta usoro.
E wezụga eriri igwe na-agbaze akwa ahịrị, igwe nkpuchi ihu bụkwa mmepụta ụlọ ọrụ anyị. Dabere na ndị ahịa anyị chọrọ, ụlọ ọrụ anyị nwere ike ịnye ụdị igwe mkpuchi dị iche iche.